Tourisms Online News -
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण पर्न गएको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै पर्यटन व्यवसायीहरुलाई ५ प्रतिशत सहुलिय व्याजमा ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा पर्यटन पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजना विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
स्वर्णिम सारथी संस्था सोलुखुम्बले कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका ५१ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । संस्थाका पदाधिकारीहरु र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरुबाट सहयोग रकम संकलन गरी उनीहरुलाई राहत वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष माया शेर्पाले बताउनुभयो ।
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ५ नया बजारमा रहेको कुटानीपिसानी मिल । घट्टा तथा जाँतोलाई विस्थापित गर्दै पछिल्लो समय कुटानीपिसानी मिलको प्रयोग बढ्दो छ । फोटो सुजता तामाङ...
लकडाउनका कारण सुनसान देखिएको सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी बजार । फोटो:- सुन्दर तामाङ...
बेलायती सेनाबाट अवकाशप्राप्त श्रीप्रसाद गुरुङ जीवनको दोस्रो ‘इनिङ’मा हुनुहुन्छ । जीवनको यो समय बेलायतमै रहेर आरामसाथ विताउँने अवसर उहाँसँग छ । अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायतले आवासीय सुविधा दिने गरेको छ । तर, स्वदेशमै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुने श्रीप्रसाद ती सबै सुविधा त्य...
सगरमाथाको ट्राफिक जामबारे आरोहीहरुको अनुभव
काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणमा जाँदा र फर्कदा सबैले एउटै डोरीको बाटो भएर हिड्नुपर्ने भएकाले लामो लाईनमा बस्नुपरेको आरोहीहरुले बताएका छन् । जाने र फर्कने बाटो फरक भए यसरी लाईन बस्नुपर्ने अवस्था नआउने उनीहरुको भनाइ छ । ‘जाने र फर्कने एउटै डोरीको बाटो हुँदा सुरक्षालाई महत्व दिनुपर्छ । यस्तो बेलामा लामो ल...
‘पर्यटन क्षेत्रमा दैनिक समस्या थपिंदो , तर बोल्दैन नियमनकारी निकाय’
पर्यटन ब्यवसायीहरूले स्थानीय तहले पछिल्लो समय आफूखुसी शुल्क उठाउने तथा होटलहरूले समेत मनोमानी रुपमा मुल्य बृद्धि गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । नियमनकारी निकायले समेत उचित ध्यान दिन नसक्दा ब्यवसायीहरू थप मारमा परेको उनीहरुको भनाई छ । टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नवराज दाहाल...
आरोहीहरुको गाउ फोर्चे । यहाका प्राय सवै पुरुषहरु हिमाल आरोहण पेशामा संलग्न छन् ।...
स्वर्णिम सारथी संस्था सोलुखुम्बले कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका ५१ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । संस्थाका पदाधिकारीहरु र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरुबाट सहयोग रकम संकलन गरी उनीहरुलाई राहत वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष माया शेर्पाले बताउनुभयो । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको बडा नम्बर ४, ५ र ६ क...
श्रमिक महिला दिवसको अबसरमा शेर्पालाई दुई बटा पुरस्कार ।
शिवरात्रीमा नमस्ते ब्याण्डले विश्व सङ्गीत महोत्सव आयोजना गर्ने ।
एनएमएको ४६ औं स्थापना दिवस
‘हामीले उठाउने शुल्क रोकिंदैन निरन्तर चलिरहन्छ’ अध्यक्ष शेर्पा (खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपलिका)
हिमालमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दै ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा पर्यटन पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने ब...
सोलुखुम्बु नाम्चेका सबै होटलहरु शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । कोरोना भाई...
पहिलो शेर्पा महिला पत्रकारको रुपमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएका सोलुखुम...
माप्यदुधकोशी गाउपालिकाको बाघलडेमा रक क्याईम्विङ गर्न सकिने ।
नया आईजीपीमा ठाकुर ज्ञवाली ।
‘व्यवसायीको काम भोट हाल्ने मात्र होईन वाच डगको भूमिका चाहन्छु’ अध्यक्ष सुवेदी
‘सबैलाई समेटेर नेतृत्व गर्न सक्छु’ अध्यक्षका आकांक्षी तेजबहादुर
मेहनतले बनेका अम्बिर
टान नेतृत्वका आकांक्षीलाई सुझाव
सगरमाथा र सरकार
पर्यटन क्षेत्रमा राजनीतिको छायाँ
अपर सोलुको स्थानीयलाई दिईने शेयरबारे मेरो पनि भन्नु छ :
सोलुखुम्बुका ३ बटा स्वास्थ्य संस्था १५ वेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती हुदै ।
पर्यटक प्रबेशद्धारको रुपमा रहेको सोलुखुम्बुको नाम्चेमा १५ वेडको अस्पताल निर्माण हुनेपछि त्...
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १३२ केभी सोलु करिडोर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको अवरोध हटाउ...
भोजपुरलाई दक्षिणी क्षेत्रबाट तराईसँग जोड्ने सप्तकोशीमा सञ्चालित (जलयातयात) जेटबोट सेवा बन्...
नेपाल ओलम्पिक कमिटीद्धारा प्रादेशिक कमिटी गठन
राईड डाउनहिलको उपाधि सोलुखुम्बुका शेर्पालाई ।
हात्तीवन हिल फर्पिङमा भएको हिमालयन आउटडोर फेस्टिभल एडभेन्चर स्पोर्टस् अन्तरगत साईकल राईड डाउनहिलको उपाधि सोलुखुम्बुमा ग...
पाँचपोखरी ट्रेल हाल्फ म्याराथन २०१९ हुने
काठमाडौ । सिन्धुपाल्चोक स्थित पाँचपोखरीमा ‘पाँचपोखरी ट्रेल हाल्फ म्याराथन २०१९’ हुने भएको छ । पाँचपोखरीलाई धार्मिक पर्...
‘तेञ्जिङ हिलारी एभरेष्ट म्याराथन’ जेठ १५ मा
काठमाडौं । ‘तेञ्जिङ हिलारी एभरेष्ट म्याराथन’ को १७ औं चरण जेठ १५ गते हुने भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरब...
नेयमारलाई आगामी सिजनका सुरुवाती तीन खेल खेल्न प्रतिबन्ध ।
युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युएईएफएले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का स्ट्राइकर नेयमारलाई तीन खेलको प्रत...
मिस टुरिजमको उपाधि आरजुलाई
ब्रेल लिपीमा मुक्तक
कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कर फिर्ता हुने ।
‘आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यात बृद्धि हुनुपर्छ’ उपराष्ट्रपति पुन
शंखमूलमा ए–वान क्याफेको १७ औं शाखा विस्तार
न्यूयोर्क र बैंककमा गणतन्त्र र सगरमाथा दिवस
प्रवासी कानुन काम नलाग्ने भन्दै ट्रम्पले नेपालीको गरे आलोचना ।
आँधीको डरले ८ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
भारतमा आजदेखि लोकसभाको निर्वाचन हुँदै ।
विश्वमा फाँसीको घटनामा कमी,
बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मे सत्ता छाड्न तयार
Timro lagi Ma chhu
कुमार प्रयासको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजानिक । भिडियो सहित
नेपाल र नेपाली हिमाललाई माया गर्ने,